HomeSuuqa kala iibsigaChelsea oo dooneysa daafaca kooxda Atletico Madrid ee Jose Gimenez
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay ka fiirsaneyso inay u dhaqaaqdo kooxda ka dhisan La Liga, daafaca dhexe ee Atletico Madrid Jose Gimenez inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaaga soo socda.
Daafaca heerka caalami ee reer Uruguay ayaa diirada u saarnaa kooxda ka dhisan Galbeedka London horaantii 2020, kaliya kooxaha waa weyn ee Premier League ayaa go’aansaday in qiimaha ay Atletico weydiisatay uu ahaa mid aad u sareeya taa badalkeedana ay ku guuleysatay inay si xor ah kula soo wareegto Thiago Silva.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Fabrizio Romano’s Here We Go podcast, Blues ayaa cusbooneysiin doonta xiisaheeda dhamaadka xilli ciyaareedkan iyadoo Frank Lampard uu doonayo inuu ku daro koox kale daafac heer sarre ah.
25 jirkaan, oo haatan lagu qiimeeyo £ 100m, ayaa kaliya shan kulan kusoo bilowday dhamaan tartamada ololahan.
Waqtiga kaliya labo sano iyo bar qandaraaskiisa daafaca, Atletico waxaa laga yaabaa inay dib u qiimeyso mowqifkooda ku aadan ciyaaryahanka reer Uruguay.
Chelsea ayaa sidoo kale la rumeysan yahay inay ku rajo weyn tahay inay qandaraaska u kordhiso halyeeyga daafaca dhexe, Thiago Silva kaasoo wacdaro ka dhigay Stamford Bridge tan iyo markii uu yimid xagaagii.
Dhanka kale, Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay wadahadal la yeelan doonto wakiilka Bayern Munich daafaca boosaska badan ee David Alaba marka heshiiska bisha Janaayo dib loo furo.
Alaba ayaan wali qandaraas cusub u saxiixin Allianz Arena, sida ay haatan tahay, ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Austria ayaa xor u noqon doona inuu la hadlo koox ajnabi ah bisha Janaayo.
Kooxo dhowr ah, oo ay ku jiraan kooxaha Chelsea kula xafiiltama Premier League, Liverpool iyo kooxda heysata horyaalka Serie A ee Juventus ayaa lala xiriirinayaa inay xiiseynayaan 28 jirkaan daafaca ka ciyaara, kaasoo weli udub dhexaad u ah kooxda heysata horyaalnimada Yurub.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay wariyaha Bild Christian Falk, wakiilka Alaba ee Pini Zahavi ayaa wadahadalo la yeelan doona Chelsea bisha Janaayo oo ku saabsan suurtogalnimada uu ugu biirayo kooxda ka dhisan Galbeedka London.